Samachar Batika || News from Nepal » लकडाउनमा कसरी घर–घरमा अत्यावश्यक सामान पुर्‍याउने? दाङबाट सिक्ने कि!
‘पालै पालो एक–एक गरी आएर दुरी कायम गरि सामान किनेर लैजानुहोस्’,अत्यावश्यक सामग्री बोकेको पिकअप माइकिङ गर्दै बस्ती-बस्तीमा पुग्छ।
त्यसले तरकारी र फलफूलको दैनिक दर रेट भन्छ। कसैले ठ’गी गर्न नपाओस् भनेर फलफूल र तरकारीको रेट विशेष महत्वका दिएर माइकिङ गरिन्छ। अन्य खाद्यान्न सबैको दररेट गाडीमै हुन्छ।
लकडाउनको पूर्ण पालन गर्न, कोरोना भा’इरसको सं’क्रमणबाट जोगिने उपायबारे पनि बस्तीबस्तीमा जिंगल बजिरहन्छ।
दाङको घोराहीमा विगत पाँच दिनदेखि अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामान गाडीबाट यसरी नै घरमै पुर्‍याउँदै आइरहेको छ। उपभोक्ताको घर–घरमा सामान पुर्‍याउने कामका लागि २३ वटा पिकअप परिचालन गरिएको छ।
एक जना चालक, सेल्स म्यान र सहयोगी त्यसका लागि खटिएका छन्। खाना पकाउने ग्यास,दूध, तरकारी, फलफूल र मासु पनि घर आँगनमै सहजै उपलब्ध छ। एउटा परिवारले एक पटकमा २५ किलो चामल, एक प्याकेट पिठो, दुई प्याकेट नुन किन्न पाउँछन्।
गाडीमा इन्धन हाल्नको लागि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले सहयोग गरेको छ। उसले इन्धनको लागि दुई लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
चैत १७ गतेदेखि अति आवश्यकीय वस्तुहरूको घुम्ती सेवामार्फत् उपभोक्ताको घर–घरमा सामान पठाउन थालिएको हो। २० गतेसम्म घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ र १५ को बजार क्षेत्रमा मात्रै सेवा केन्द्रित थियो। तर अत्यधिक माग बढेपछि शनिबारसम्म नगरका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा दिन थालिएको छ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालका अनुसार वडा नं. २,३,१०,१३,१६ र १८ सम्म शनिबार सेवा विस्तार गरिएको छ।
यसरी उपभोक्ताको घर–घरमा सेवा प्रदान गर्न लकडाउनको अवधिभर परिचालन हुने स्वयसेवक तथा कर्मचारी पनि खटिएका छन्।
पालै पालो एक–एक गरी आएर दुरी कायम गरि सामान किनेर लैजानुहोस्’,अत्यावश्यक सामग्री बोकेको पिकअप माइकिङ गर्दै बस्ती-बस्तीमा पुग्छ
यसरी स्वयम् सेवाका रूपमा खटिने व्यवसायीलाई उद्योग वाणिज्य संघले बिहानको खाना र दिउँसोको खाजाको लागि दैनिक तीन सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ। कर्मचारी तथा अन्य श्रमिकलाई भने सरकारले तोकेको रेट अनुसार दैनिक ज्याला दिने गरिएको अध्यक्ष भुसालले सेतोपाटीलाई बताए।
गाडी घर-घरमै पुर्‍याएर घुम्ती सेवा दिइएको भए पनि पुरानै दर रेटमा सामान विक्री गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
पुरानो स्टक सकिएको हुँदा अबदेखि प्याकेटको पिठो किन्दा उपभोक्ताले केही महँगो उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने भएको छ।
शुक्रबारमात्रै उद्योग वाणिज्य संघले भैरहवाबाट पिठो खरिद गर्दा अहिलेको परिस्थितिका कारण महँगो पर्न गएको हुँदा शनिबारदेखि पिठोको प्याकेटमा दश रुपैयाँ बढी पर्न गएको उनले बताए।
अध्यक्ष भुसालले भने, ‘हामीसँग अझै पुरानो स्टक चामल, नुन र तेल छँदैछ। त्यसैले ती चिजको मूल्य लकडाउन पहिलासम्म जे थियो त्यही रेटमा बेचिने छ।’
घुम्ती सेवा सुरू गर्नुको मुख्य उद्धेश्य बजारमा किनमेलका लागि साँझ-बिहान हुने भीडभाड कम गर्नु हो। सरकारले लक–डाउनको समयमा पनि अत्यावश्यक सामग्री किनमेल गर्न साँझ र बिहानको केही समय छुट्याएको छ।
त्यो अवधिमा बजार क्षेत्रमा मानिसहरूको भीडभाड बाक्लै हुन थालेपछि संभावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न घुम्ती सेवा सुरू गर्ने निर्णय भएको घोराही १४ का वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले बताए।
‘के बिहान र साँझमा कोरोना भाइरस नसर्ने हो र,’ प्रश्न गर्दै डाँगीले भने ‘लकडाउनमा पनि मानिसहरू मेलामा आएजस्तै गरी हात समातेर रमिता हेर्न आएजस्तै गरी बजारमा आउने गर्न थाले। त्यो रोक्न हाम्रो आग्रहमा उद्योग वाणिज्य संघले घुम्ती सेवा सुरू गरेको हो।’
नियममा घरको एक जनामात्र सामान किन्न बाहिर निस्कन पाउँछन्। तर व्यवहारमा भने त्यो लागू भएन। जति सम्झाउँदा पनि मानिसहरूले अ’टेरी गरेपछि प्रहरी प्रशासनसँगको छलफलपछि मानिसलाई बजारमा आउनै नदिने उद्धेश्यका साथ घुम्ती सेवा सुरू भएको उनले जानकारी दिए।
कोरोनाभा’इरसको सं’क्रमणबाट जोगाउन सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरू गर्‍यो। १२ गते घोराहीका बजार क्षेत्रमा किराना पसल, फलफूल, तरकारी पसलका अगाडि चुना र मार्करले ग्राहक उभिने स्थानको गोलो घेरा लगाइयो। तर, पालना भएन। नाम मात्रैको लकडाउन जस्तो भयो।
‘जति आग्रह गर्दा उ’ल्लंघन गरेपछि प्रशासनलाई हामी सक्दैनौं हात उठाउँछौं भनेर चे’तावनी दियौं,’ अध्यक्ष डाँगीले भने,‘अनि सरोकारवाला निकायहरूसँग ६ घन्टाजति छलफल भयो र त्यही छलफलले घुम्ती सेवा सुरू गर्ने निर्णय गरेको हो।’
होम डेलिभरीले लकडाउनले बजारमा भीडभाडका निकै कम भएको छ। पूर्ण रूपमा लकडाउन कार्यान्वयन गर्न धेरै सहज भएको अध्यक्ष डाँगीले जानकारी दिए।
उनले घोराहीका बजार क्षेत्र वडा नं. १४ र १५ मा नियमित रूपमा अत्यावश्यकीय वस्तु बोकेका गाडीहरू निरन्तर घुमिरहने भए पनि ग्रामिण भेगमा भने बोलाएपछि मात्रै पठाउने गरिएको जानकारी दिए।
‘हामी त निर्णयकर्ता मात्रै हौं,’ डाँगीले भने ‘निर्णय व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं।’
प्रकाशित मिति २३ चैत्र २०७६, आईतवार ०८:१३